China Drive In Rack Kugadzira uye Fekitori | Huade
Kutyaira mumadhaki kunoshandisa zvakanyanya nzvimbo yakatwasuka uye yakatwasuka nekubvisa nzira dzekushandira matiraki eforklift pakati pemachira, forklifts inopinda munzira dzekuchengetera dzemadhiraivha-mumatura ekuchengetera uye kutora mapallet. Naizvozvo mashinari ekushandisa anobviswa kuchengetedza yakawanda nzvimbo iripo. Iyi sisitimu inokodzera mamiriro ekushandisa nzvimbo kwakanyanya kukosha pane kusarudzwa kwezvigadzirwa zvakachengetwa, yakanakira kuchengetedza huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakaenzana zvakavezwa, mune rimwe izwi, huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakafanana.
Iwo akatakurwa mapallet anoiswa imwe neumwe pane maviri njanji mumugwagwa, zvichikonzera kurongeka kwakateerana kwekututira uye kunhonga, pane angangoita maviri marudzi erakisi akadaro, kutyaira mukati uye kutyaira kuburikidza.
Iyo forklift inogona kutyaira mukati chete kune rumwe rutivi rwenzira yekumisikidza, yekupedzisira pallet mukati ndiyo yekutanga pallet kunze. Rudzi urwu rwechigadziro izano rekuchengetera zvinhu zvine low low turnover.
Iyo forklift inogona kutyaira mukati mativi ese eiyo racking lane (kumberi uye kumashure), yekutanga pallet mukati ndiyo yekutanga pallet kunze. Rudzi urwu rwechigadziro runonyanya kushandiswa kune yakakwira mari yekuchengetera.
Nekuti iyo forklift inotyaira munzira yekumhanyisa, zvinopesana-zvinorovera zvinofanirwa kutariswa mukugadzirwa kwesarudzo, kazhinji njanji dzepasi dzinosanganisirwa kudzivirira kusimuka uye kutungamira marori eforklift. inokurudzirwa kubatsira vanoshanda kurongedza uye kutora mapaleti nekukurumidza uye nenzira kwayo.
Kwidziridza mashandisiro epasi nzvimbo
Bvisa asina kufanira mashandiro ekushandisa
Zviri nyore kuwedzerwa kuti zvive nyore kuchinjika
Yakakwana kune yakakura yakawanda zvigadzirwa ine mashoma akasiyana
FIFO / LIFO yesarudzo, yakanaka kune yekuchengetera mwaka
Kuchengetedza kwakachengeteka uye kwakatsetseka kwezvinhu zvinomanikidza
Inowanzo shandiswa mukutonhorera kutonhora nekuda kweakanakisa nzvimbo mashandisiro ekuchengetedza mari yekushisa tembiricha
Pashure: Katoni Kuyerera Rack